I-Geobide, ukusebenzisana ne-OGC yedatha - i-Geofumed
Geobide, ukusebenzisana ne-OGC idatha
NgoNovemba, 2011 Geospatial - GIS
Into ebaluleke kakhulu ukuba izicelo ze-CAD / ze-GIS zamanje kufuneka zibe nekhono lokusebenzisana nedata ephathwe kumafomathi aqhelekileyo ngamaziko okanye kumaziko aphantsi.
Kule nkalo, indima edlalwa yi-Open GIS Consortium kunye neMicrosoft Open Open initiatives iye yaxabiseka, okokuba ukusetyenziswa kokusebenza ngoku kudibene nenkonzo yedatha kwimigangatho kungekhona ukufundwa, ukungenisa okanye ukuguqulwa kweefayile. Ngenxa yoko, imiqathango ye-IDE kunye nee-geoportals ngoku iyaziwa kakuhle.
I-Geobide yenye yeenkqubo ezandibangel 'ingqalelo kwangoko, ekubeni nangona i-proprietary, ayihlose ukuba ibe esinye isixhobo seCAD / GIS, kodwa kunoko isebenzisana nedatha kwiiplatifomu ezikhoyo. Bobabini ngeenkcukacha ze-Microstation, ezifana ne-AutoCAD okanye i-ArcMap, yenza kakuhle.
Makhe sibone oko kwenzekayo ngeefomati ze-OGC.
Lo ngumzekelo weziseko zedatha yendawo (IDE) ye-Navarre, apho idatha ye-geospatial ikhona khona zombini Indlunkulu yeComputer yeCadastre, kwimeko kaRhulumente; i INkonzo yezoMhlaba okanye i-porta ye-IDENA (i-Spatial Data Infrastructure ye-Navarra).
kwimeko ye-IDENA, xa ukhetha ikhonkco ebonisa izalathisi ze-OGC, umboniso olandelayo uvela:
Ukuba sifuna ukwenza oku nge GeoMap:
Kwimenyu ephezulu, sikhetha "uluhlu lwe raster oluvulekileyo"Emva koko, kwintsimi yomkhosi sabhala:
siyongeza kwaye emva koko sicinezela iqhosha elithi "Xhuma".
Iwindow entsha iya kubonakala, kwaye kule nto sikhetha uluhlu lomdla wethu. Kuphela xa sinomdla kwinkqubo ekhankanyiweyo yokubhekisela kwi-EPSG: 04230 ED50, siyifaka ngaphantsi.
Xa ukhetha "Kulungile", simele silayishe umgca kumbukeli.
Oku kwaye ndiyenza ngenguqu yangaphambili, leyo ngexesha elifutshane liza kuba lilifa kuphela. Umzekelo olandelayo uvela kwinguqulelo entsha, ebonisa ulwazi lweefadastral malunga ne-PNOA orthophoto.
Yenza ukuthunyelwa kunye nokulungiswa kwedatha kusebenza ngokugqithiseleyo xa sitshintsha okanye sitshintsha ubungakanani bombono. Kwakhona inzuzo yamathebhu iququzelela ukuvumelanisa ngaphandle kokuba ulayishe amanqaku amaninzi ngombono ofanayo.
I-GeoMap eyiyo eyiyo, kungekhona nje ngeendlela zeWMS kodwa kunye neWFS.
Khuphela i Geobide
Post edlulileyo«Edlulileyo Isicwangciso soLawulo oluPhezulu (GEMAS) sikhetha i-gvSIG
Post Next I-Bentley I-model, ukusebenzisana nge-ODBCOkulandelayo "